Unit weight = 490 lb/ft3
သံချောင်းဆိုဒ်များ၏ တစ်မီတာတွင်ရှိသော အလေးချိန် ပုံသေနည်း
d2/162 (kg/m), where d=diameter in mm
၁၂မီတာ(၄၀ပေ) အရှည်ရှိသံချောင်းဆိုဒ်များ၏ (၁)တန်တွင်ရှိသော အချောင်းရေ
25mm = 21 no
22mm = 27 no
20mm = 33 no
18mm = 41 no
16mm = 53 no
12mm = 88 no
10mm = 135 no
Ties & Stirrups အတွက်သုံးတဲ့ 6.5mm, 8mm စတာတွေက အချောင်းရေနဲ့မလာဘဲ coil နဲ့လာပါတယ်
8mm = 0.395 kg/m, 1ton=2531m, 1 viss = 13.35 = 13’4″
6.5mm = 0.26 kg/m, 1ton=3834m, 1 viss = 20.22 = 20’3″
1 bag = 50 kg = 112 lb (Including bag) = 1.2 cft
Brick wt =6lb>8lb
> အုတ်အရွယ်အစား နှင့် ပုံစံ ညီနေရမည်
> အုတ်ချပ်ချင်း တီးခပ်လျှင် ကြည်လင်သော အသံလွင်ရမည်
> ကျိုးနေသော အုတ်သားကိုကြည့်လျှင် ညီညာပြီး သမသော အသား ပေါ်နေရမည်
> အုတ်များ အားကောင်းပြီး ဖိအားဒဏ်ကို 35MPa အထက် ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်
> အုတ်များသည် ကောင်းစွာမာကျောပြီး လက်သည်းဖြင့်ခြစ်ကြည့်လျှင် အုတ်၏မျက်နှာပြင်တွင် လက်သည်းရာ ထင်ကျန်ခြင်း မရှိစေရ။
> အုတ်ကို ၂၄နာရီ ရေစိမ်ထားရင် ၄င်းအလေးချိန် ၂၀% ထက်ပိုသောရေကို မစုပ်ရပါ
> အုတ်ချပ်တွင် အရည်ပျော်ဆား ပါဝင်စေခြင်းမရှိစေရ။ ဆားများပါဝင်ခဲ့လျှင် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် မီးခိုးရောင် (သို့) အဖြူရောင် အဖတ်များကျန်နေမည်။
4. Sand & Stone
၁ ကျင်း = ၁၀၀ ကုဗပေ
အလျားxအနံxအမြင့် မြှောက်ကာ ကျင်းဖွဲ့တွက်သည်။
1 ton = 50 cft
အသား ၅၀ကုဗပေ ကို တစ်တန် ဟုတွက်သည်။
II.Ready mixed concrete grade
Ready mixed concrete မှာ M20, M25, M30 စသဖြင့်ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဥပမာ M20 ဆိုရာမှာ M က mix ကို ဆိုလိုပါတယ် 25 ကတော့ 28 days cube strength 25 MPa (N/mm2) လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ 1MPa ဟာ 145.04 Psi နဲ့ ညီမျှပါတယ်။ (M အစား G ကို သုံးတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်)
G 20 = 20 MPa = 2900 psi
G 25 = 25 MPa = 3625 psi
G 30 = 30 MPa = 4350 psi
G 35 = 35 MPa = 5075 psi
ဒီမှာသတိပြုရမှာက Structural Designer က 28 days မှာ ရှိတဲ့ concrete ရဲ့ cylinder strength (f’c )ကို ပြောပါတယ်။ Concrete ရောင်းတဲ့သူတွေကတော့ 28 days cube strength (f’c cube) ကို ပြောပါတယ်။ ဒီနှစ်ခုရဲ့ ဆက်သွယ်ချက်ကတော့
CQHP guidelines အရ
f’c ~ 0.78 f’c cube (f’c
f’c ~ 0.8 f’c cube (3500<f psi=”">
f’c ~ 0.81 f’c cube (5000<f psi=”">
f’c ~ 0.83 f’c cube (f’c >6000 psi) ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် concrete မှာရာမှာ Structural Designer ကပေးတဲ့ f’c တန်ဖိုးကို f’c cube ပြောင်းကြည့်ပြီးမှ ကိုက်ညီတဲ့ grade ကို မှာရမှာပါ။
Grade နဲ့ concrete အရည်အသွေး သတ်မှတ်ချက်တွေကတော့
Ordinary concrete – M10, M15, M20
Standard Concrete – M25, M30, M35, M40, M45. M50, M55
High strength concrete – M60, M65, M